Hevitra avy amin'i Tanella Boni ho an'ny "Point de suture" nataon'i Grobli Zirignon - Afrikhepri Fondation
Teny fampidiran'i Tanella Boni momba ny "Point de suture" nataon'i Grobli Zirignon
DTaorian'ny famoriany voalohany, Epaves (1981), dia nametraka ny feo i Grobli Zirignon. Nilaza izy fa poeta sesitany, tsy nisy farany nirenireny. Nihira momba ny fisian'io lehilahy tsy manana zom-pirenena io izy nitady ny firaisankinany very. Ny fanaparitahana (1982) dia nanamafy ny lohahevitry ny fandravana ny fisian'ny olona "natsipy toy ny kijana" teo amin'izao tontolo izao, tamin'ny fikarakarana ny fahafatesan'ny olona rehetra tany an'efitra tsy takatry ny saina. Ny zava-drehetra dia mitranga raha toa ny poeta, manamorona io zotra io, nitazona, toy ny protôzônia, manodidina ny atin'ny afovoany, napetraka eo anelanelan'ny fahafatesana, fisiana ary fiainana tena izy, ity fitarihana izay tsy mifarana ity.
Ao amin'ny boaty fanafodiny, ny poeta efa misy dia nametraka ho an'ny fahasambarany sy ho antsika, latsaka fotsiny ny zavatra niainany manokana tamin'ny pejy roa na telo. Avy eo fehezam-boninkazo mahafinaritra an'ny ek-sistence, ny Fiteny, ny fahalalana, an'Andriamanitra, ny iray hafa.
Fa ahoana ny famonoana ny fahafatesana raha toa ka ady ny viagra, raha i Polemos, hoy ny présokratika, no Rain'ny zava-drehetra? Ny ek-sistant, ity sesitany mandrakizay dia tsy manan-tsafidy. Niampita teo anelanelan'ny fandrarana roa: ny vaingan'ny fahafatesan'ny maty izay tsy maty sy ny ady maharitra. Na mianjera ao amin'ny "lavaka iorenan'ny maty velona izy, na sahy mieboebo sy manambony ny fitafiany amin'ny sazy mandrapahafatiny. Na izany na tsy izany, mandeha tsy misy tanjona izy, toy ny mpiambina tsy mivadika amin'ny toerany na vorona voafatotra. Tsy faly, tsy manana fahafinaretana, sorena.
Raha sendra mipoitra avy amin'ity fanina ilaina ity izy dia hitraka, tompon'andraikitra amin'ny maha-I ahy. Izy io dia hanao bubble sy faribolana ambonin'ny ranomasina, ity Hafa fototra izay ny endrik'izy ireo dia ny reniny mitelina, miparitaka ary manafika.
An-tokotany. Ny tabataban'ny Fiteny, ireo fambara fahoriana ireo izay tsy misy maka, dia ilay vatan-kazo tsy azo ihodivirana amin'ny sesitany rehetra. Raha toa ka miteny mafy ny ek-sistant raha ilaina, tsy misy fiahiahiana ny fanatrehany sy ny fijerin'ny iray hafa, raha toa ka manao toy ny kolo mitokana izy, ny fihetsiky ny vatany. Avelao izy hanana fahafinaretana, mandeha toy ny mpandeha tady amin'ny tady, tsara kokoa, tetezana caiman-rickety, mihantona eo anelanelan'ny lanitra sy ny tany ambonin'ny ranomasina.
Lafiny zaridaina. Tsy maintsy eritreretintsika ho toy ny Robinson Crusoe ny poeta efa misy raha tsy misy ny zoma. Tafahitsoka tsy ho aiza, hamaky vato any amin'ny nosy efitra. Hanao vatana sy fanahy izy, amin'ny maha olona afaka azy, handresy "polder" iray mandrahona tsy misy farany. Hamboly ao izy fa tsy ny tulip fa "ny raozy / ny raozin'ny fasika", izay ho fantany tsy ho ela.
Ka hanana fotoana fialan-tsasatra izy hahita, noho ny toetr'andro tsara, ny "helatra" ny lanitra ety an-tany. Plotaly paradisa vitsivitsy no hisokatra eo am-pototry azy. Toerana tsy misy ilana azy sy chimerika, fanilo avy any an-kafa. Hataony batemy amin'izy ireo ny Fahamarinana, Finoana, Andriamanitra… ireo mpamitaka ireo izay tiany ho faty. Tantaram-pitiavana mahafinaritra, miaraka amin'ny bonus fanampiny amin'ny daty tsy tratra. Andriamanitra, raha ny marina, "ny lafika roa sosona" ary koa ny hevitra manintona indrindra, dia hijanona tsy eo. Mandrakizay. Ilay tête-à-tête nofinofy, miaraka amin'ny Ray, dia tsy hitranga.
Ny teny dia ho asan'ny mpanakanto efa misy na ho tsinontsinona. Saingy "misy iray" araka ny tadiavin'i Lacan. Izany no antony handresen'ny mpitsabo efa misy, na eo aza ny zava-drehetra, ny fakam-panahy hamono tena.
Tanella Boni, Fanambarana mialoha ny Suture Point
Jereo ny Empire Series 1 Season (2015)